> Resource> iOS> Get Music anya iOS 7 on Mac / Windows PC
"E nwere ihe karịrị 300 songs na m iOS ngwaọrụ, olee otú m ga-esi ha apụ m iOS 7 ngwaọrụ na-etinye ha na m MacBook Pro ma ọ bụ iTunes Library. N'ihi!"
Mgbe upgrading ka iOS 7, ọrụ nwere ike chọrọ inwe music apụ ha iOS 7 ngwaọrụ, na-akwadebe ndị ọzọ ohere maka ọhụrụ ngwa, songs, ma ọ bụ vidiyo. Na ụfọdụ ndị ọrụ nwaa iji nweta music anya iOS 7 ka iTunes ma ọ bụ na kọmputa maka ndabere. N'agbanyeghị ihe gị nzube bụ, ị pụrụ ime ya ugbu a! Isiokwu a enyere ndị ọrụ na-music anya iOS 7 ngwaọrụ mfe na rụọ ọrụ nke ọma. 3 akụkụ na-gụnyere ebe a:
Part 1. Wepụ music si iOS 7 Devices
Part 2.Get Music anya iOS 7 Devices na iTunes Library
Part 3.Take Music anya iOS 7 Devices ka a Computer
1. Download na wụnye software anyị mkpa, Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Windows). Get nri version maka kọmputa gị. Ugbu a ma nke ha na-akwado iOS 7 n'ụzọ zuru ezu.
2. Jikọọ gị iOS 7 ngwaọrụ gị na kọmputa site na eriri USB na ẹkedori Wondershare TunesGo.
Cheta na: The nzọụkwụ nke na-music anya ihe iOS 7 ngwaọrụ Wondershare TunesGo (Mac) na Wondershare TunesGo (Windows) ndị fọrọ nke nta otu ihe ahụ. Ndị na-esonụ, Aga m egosi gị otú nweta ihe mgbaru ọsọ gị na Wondershare TunesGo (Mac).N'ihi na Windows ọrụ, biko gụọ TunesGo (Windows) ọrụ ndu >>
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe music anya ihe iOS 7 ngwaọrụ efu ohere, ị nwere ike wepụ ha na Wondershare TunesGo (Mac). Pịa Music ịbanye Music window. Si ebe a, ihe niile songs na gị iOS 7 ngwaọrụ-egosipụta. Họrọ achọghị n'anya, pịa Hichapụ n'elu iji nweta ha anya gị iOS 7 ngwaọrụ-adịgide adịgide.
Part 2. Get Music anya iOS 7 Devices na iTunes Library
Wepụ music site na iOS 7 ngwaọrụ dị mfe. Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa na-music anya iOS 7 ngwaọrụ na iTunes Library, ọ na-ewe ikiaka griiz iji nweta ya ala. Luckily, na Wondershare TunesGo (Mac), ọ ga-abụ nnọọ mfe n'ihi na ị iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị. Pịa "Music" na pịa "Smart Mbupụ na iTunes", niile music na gị iOS 7 ngwaọrụ ga-depụtaghachiri gị Mac-akpaghị aka. N'ezie, ị na-enwe ike iji nweta họrọ songs anya gị iOS 7 ngwaọrụ na mbupụ ha ka ha iTunes Library site na ịpị "Mbupụ na iTunes".
Part 3. Were Music anya iOS 7 Devices ka a Computer
Mgbe ụfọdụ, ụfọdụ ndị ọrụ na-ahọrọ na-music anya ihe ngwaọrụ na kọmputa. Wondershare TunesGo (Mac) ohere ọrụ ime nke ahụ ka mma. Pịa Music ikpughe Music windows. Si ebe a, ị nwere ike họrọ songs na pịa Export ka Mac iji nweta music kwụsịrị iOS 7 ngwaọrụ gị Mac. Na popped elu window, setịpụrụ a kwachie zọpụta ndị a songs.
Download Wondershare TunesGo ikpe mbipute ugbu a!